IKHITSHINI ESIBHAKABHAKENI (IINDIDI, UBUNGAKANANI KUNYE NEENQAKU ZOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Ikhitshini esibhakabhakeni (Iindidi, Ubungakanani kunye neeNqaku zoYilo)
Ikhitshini esibhakabhakeni (Iindidi, Ubungakanani kunye neeNqaku zoYilo)
Apha sigubungela uyilo lokukhanya kwelanga ekhitshini kubandakanya iintlobo ezithandwayo, ubungakanani obuqhelekileyo, indleko kunye neenzuzo kunye neengozi. Isibane esikhanyayo ekhitshini sisisombululo esihle kunye nesisebenzayo sekhaya lakho. Sonke siyayazi indlela elibaluleke ngayo ikhitshi ngaphakathi ekhaya. Kusentliziyweni yalapho sihlala khona, sipheka kwaye senze iinkumbulo ezingapheliyo. Ngokuchitha ixesha elininzi ekhitshini, sifuna nangakumbi kwesi sithuba, nokuba kungogcino olongezelelweyo, ukukhanya kwendalo okuphuculweyo okanye umoya ongcono. Isibane esikhanyayo ekhitshini asiboneleli kuphela ngesisombululo kuzo zonke ezi ngxaki, sinokukunceda ukugcina amandla akho e-akhawunti ephantsi. Makhe sijonge esibhakabhakeni esibhakabhakeni ngokweenkcukacha.
Ngawaphi amaSayizi oMbane okuKhanya okuKhanya?
Eyona ndawo ilungele ukukhanya kwesibhakabhaka ekhitshini
Iindleko zekhikhini zaseKhitshini
Ngaba ukukhanya kwesibhakabhaka kuyongeza ixabiso?
Ngaba ukukhanya kwesibhakabhaka kungumbono ombi?
Zintathu iindidi ezahlukeneyo zezikhanyiso ezithi ziqwalaselwe ekhitshini lakho: ukungena komoya, ukulungiswa kunye nokubhubha.
Njengoko igama lisitsho, olu hlobo lwesibhakabhaka lubonelela ngokungenisa umoya kwindawo-umgangatho oluncedo xa ucinga ukuba kushushu kwaye kungonwabi njani ekhitshini. Ziyilelwe ukuvula nokususa nakuphi na ukufuma, kuqinisekisa ukuhamba simahla komoya omtsha kwisithuba. Cinga ngazo njengefestile eyongezelelweyo yekhitshi, ebekwe eluphahleni olungabonisi kuphela umbono wesibhakabhaka kodwa indawo efanelekileyo yokupheka.
Ngokungafaniyo nenketho yokungenisa umoya, ukukhanya kwesibhakabhaka okungagungqiyo akuvuli ukuvumela ukutshintshiselana komoya. Itywiniwe eluphahleni. Ukuba sele unayo i-ventilator ekhitshini, okanye isithuba asiyifuni, emva koko isibhakabhaka esikhanyayo sinokuba lukhetho olufanelekileyo. Olu khetho luthatha indawo encinci, lunokubonakala lumangalisa kwaye kulula ukuyifaka.
Olu khetho lulungile ukuba unendawo encinci yokufaka isilingi. Kufakwe ityhubhu encinci ebaleka isiya ngaphandle kophahla lwakho, iye ngaphakathi ngaphakathi. Sebenzisa ubuchwephesha bokubonakalayo, ukukhanya kwendalo kubhekiswa ezantsi kumbhobho kwigumbi. Ngenxa yesayizi encinci yetyhubhu, iindleko zokuthenga kunye nokufaka ziphantsi kakhulu kunezinye iindlela ezimbini ezichaziweyo. Nangona kunjalo, ukuba ulandela iimbono ezintle - esi sisombululo asizukutsala umdla.
Akukho ubungakanani obuqhelekileyo obunjalo besibhakabhaka. Ziya kwahluka ngokobukhulu ngokomenzi ngamnye ngoko ke kufanelekile ukujonga iwebhusayithi yazo ngeenkcukacha ezithile.
Ngokubanzi, nangona kunjalo, uyakufumanisa ukuba ubude besibhakabhaka esingena umoya buza kuba yi-16 ″ ukuya kuma-96 ″, kwaye ububanzi bunokuba phakathi kwe-14 ukuya kuma-72 72. Kubungakanani obukhazimlayo besibhakabhaka-ubude bususela kwi-19 ″ -40 ″ kunye nobubanzi obusuka kwi-19 ″ ukuya kwi-119 ″. I-avareji yesibhakabhaka esibhakabhaka eyi-14 1/2 ″ ububanzi ukuze ilingane ngokulula phakathi kwe joists. Rhoqo akudluli kwi-22 ″ ubukhulu.
Yintoni eya kuba sesona sibane siphezulu ekhitshini lam? Okokuqala, likhulu kangakanani ikhitshi lakho? Ukuba ikhitshi lakho lincinci, kwaye akukho kukhanya kwendalo, ukukhanya kwesibhakabhaka kungayinto elungileyo. Esi sisombululo siza kuthatha indawo encinci kodwa sinikezele ngokukhanya kwemini kwendalo iimfuno zakho zasekhitshini. Abanye abavelisi bathi isibhakabhaka esikhanyayo sibonisa ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-95 zokukhanya kwelanga ngokupheleleyo emini. Kuyanceda ukuba sisisombululo esineendleko ezifanelekileyo…
Mhlawumbi unophakathi ukuya ikhitshi elikhulu ? Inkangeleko yayo iya kuphuculwa ngokukhanya kwemini okuphuculweyo. Ungalibali ukuba ibhonasi yezo mbono zintle kangaka zezulu. Ikhitshi lakho sele linomoya opholileyo kodwa ufuna nje ukuba lizive lilula, likhanya ngakumbi kwaye linobunewunewu. Kutheni ungazami ukhetho olukhethiweyo lokukhanya kwesibhakabhaka?
Ngaba ikhitshi lakho liphethwe kukuncipha? Ngaba igumbi liziva linyhasha xa lipheka ngenxa yokungabikho komoya owaneleyo? Uyazi ukuba iya phi le nto. Isibane esikhanyayo esingena umoya siza kukubonelela ngezibonelelo ezifanelekileyo ozifunayo ukuze uhlale upholile, uzolile kwaye uqokelele ngelixa upheka. Kwaye zikhangeleka zilungile nazo.
Ikhitshi kunye isilingi evaliweyo kunye nesibhakabhaka
Olona khetho lusisiseko esibhakabhakeni, uya kujonga iindleko ze- $ 500, kwaye oko akubandakanyi ukufakwa. Nangona kunjalo, amaxabiso ahluka kakhulu ngokuxhomekeke kumgangatho weglasi ojonge kuyo, isibane esibhakabhakeni esiza kusebenza njani, ukugqitywa kwendawo yangaphakathi njalo njalo.
Into enkulu bubungakanani besibhakabhaka ohamba kuso. Ubukhulu besibhakabhaka, kokukhona iglasi iya kusetyenziswa, ngokwendalo inyusa ixabiso. Qiniseka ukuba ufumana iikowuti ezimbalwa ngaphambi kokuba wahlukane nayo nayiphi na imali.
Njengoko usenza isigqibo malunga nokuba isibhakabhaka senzelwe wena, uya kufuna ukwazi ukuba kuyakufaneleka na. Ukuphendula lo mbuzo nangona, kuxhomekeke ekubeni ulixabiso lini.
Ngaba ukukhanya kwelanga kubonelela ngamatyala amaxabiso aphantsi? Ilebheli yokuSebenza kwaMandla ye-NRFC kwisibane esibhakabhakeni iya kubonelela ngesalathiso esihle sokusebenza kwemveliso ngokwayo. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye izinto. Umgangatho wofakelo, ubungakanani besibane esibhakabhakeni, ukulinganiswa kwamandla kunye nokubekwa kwayo yonke into enefuthe kwindlela ukukhanya kwesibhakabhaka okuya kusebenza ngayo ekugcineni kupholile ehlotyeni, kwaye kushushu ebusika. UKUBA zonke ezi zinto zisebenza ngokuchanekileyo, iindleko zakho zokufudumeza kunye nezibane kufuneka ziyeke.
Okanye ukuba isibhakabhaka sikwenza njani (kunye nabathengi abanokuba nexesha elizayo) uzive. Alithandabuzeki elokuba ukufaka isibane esibhakabhakeni ngaphakathi ekhitshini lakho kukuhamba ngesibindi kodwa kunomvuzo. Ukuba unomdla ukuphucula ukubonakala koyilo lwakho lwekhitshi , kwaye uzise ukukhanya okuqaqambileyo, okunobunewunewu kule ndawo yangaphakathi - ukukhanya kwesibhakabhaka akuyi kudanisa. Awunokonwabela nje kuphela esi sithuba sinqwenelekayo, kodwa isibhakabhaka esikhanyayo sinokunyusa ukulingana kwakho kwaye kufuneka uthengise, wenze kube lula ukukhupha indlu yakho kwintengiso.
Mhlawumbi kukunyusa imood yakho? Ukunyuka kokukhanya kokukhanya kwendalo kunezibonelelo zempilo. Ukukhanya kwelanga kukukhuthaza imeko kwaye kunceda ukwandisa inqanaba le-serotonin ekhutshwe kwingqondo, ikwenza wonwabe kwaye uvelise ngakumbi. Ke, ukuba ucinga ngexabiso ngokwempilo yakho kunye nolonwabo - isibhakabhaka esikhanyayo kufuneka senze lo msebenzi.
Ke uyazi izibonelelo zokukhanya kwezikhanyiso, kodwa uthini ngemicimbi emibi? Kukho izinto ezimbalwa onokufuna ukuba uziqwalasele:
Amanqanaba okukhanya kwiintsuku ezikhanyayo. Ngelixa ukukhanya kwemini kwendalo kwamkelekile, ngobuninzi obugqithisileyo kuya kwenza ikhitshi lakho lizive ngathi lilitha elikhulu. Ukuba uceba ukusebenzisa ikhitshi lakho ngamaxesha aqaqambileyo emini, kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo esibeka kuyo isibhakabhaka kwaye ufake iimfama.
Ukuphulukana nobushushu ebusika, kunye nobushushu obuninzi ehlotyeni. Masiphinde siyibuyisele kwinqanaba 1 phantsi kwecandelo 'Ngaba isibhakabhaka songeza ixabiso?' Ukuba ezi zinto azisebenzi kunye, ke unengxaki.
Imicimbi yokuvuza kunye nokunciphisa kunokuba ngumcimbi. Nokuba isibane esibhakabhakeni sifakwe kangakanani, sisenganakho ukuvuza. Ukuqokelelwa kwenkunkuma ngaphezulu kwesibhakabhaka kunokuthintela iipatheni eziqhelekileyo zokuhambisa amanzi, kukhokelele kunyuko kunye nokuvuza kwindawo ejikeleze isibhakabhaka ngokwaso. Amanzi emvula, ukuhamba kwekhephu kunye nokutshintsha kobushushu unyaka wonke kunegalelo koku.
Uyilo olunxulumene ngakumbi jonga igalari yethu ye Izimvo zewindow ekhitshini bay .
Ufumana ntoni ngesipho sokuhlamba somtshato
thengisa ilokhwe yomakoti kufutshane nam
indlela yokubopha isaphetha esihle
ukwenza ubudlelwane umsebenzi ucaphula